Eritreritr'i capitaine - Namana Serasera.org
5. capitaine 06/12/2009 19:10
hery>>Marina tokoa izany fa tokony hisy mihitsy ny fahendrena, indrindra @ fanapahan-kevitra izay atao. Ny fahalalana anefa tsy voatery hoe avy @ "sciences modernes" fôna, fa mety avy @ traikefa koa. Ny fahendrena rahateo koa tsy afaka mandeha irery.
besorongola>>teo @ ntaolo koa ange nisy rafitra fitondrana e (rafitra antanan-tohatra), ka izay no nanamarika ny fifandraisana teo @ mpitondra sy ny hoentina, ny ray aman-dreny sy ny zanaka,...Eo ihany koa ny Fihavanana malagasy, teo koa ny fatahorana an'i Zanahary sy ny razana. Ireny rehetra ireny no nanampy ny malagasy hifanaja. Saingy izao, isika tsy @ andron'ny ntaolo intsony, "mondialisation" ndray izao, manomboka mihavery ny soatoavina taloha. Inona ary no hevitra?
4. capitaine 06/12/2009 18:57
hery>>Marina tokoa izany fa tokony hisy mihitsy ny fahendrena, indrindra @ fanapahan-kevitra izay atao. Ny fahalalana anefa tsy voatery hoe avy @ "sciences modernes" fôna, fa mety avy @ traikefa koa.
besorongola>>teo @ ntaolo koa ange nisy rafitra fitondrana e (rafitra antanan-tohatra), ka izay no nanamarika ny fifandraisana teo @ mpitondra sy ny hoentina, ny ray aman-dreny sy ny zanaka,...Eo ihany koa ny Fihavanana malagasy, teo koa ny fatahorana an'i Zanahary sy ny razana. Ireny rehetra ireny no nanampy ny malagasy hifanaja. Saingy izao, isika tsy @ andron'ny ntaolo intsony, "mondialisation" ndray izao, manomboka mihavery ny soatoavina taloha.
3. cutie 03/12/2009 21:28
d'accord 100% e
2. hery 03/12/2009 21:04
Ampy ve ny fahalalàna anefa? Tsy tokony hisy fahendrena ve?
besorongola> Nanana fahalalàna kosa ny Ntaolo ka. Taloha tsisy laboratoires nanamboarana fanafody kanefa betsaka ny aretina sitrana sns.
1. besorongola 03/12/2009 19:02
toa tsy ny fahalalana no ilaina hanajana ny hafa. satria taloha ny ntaolo tsy dia nahay fa nitandro fatratra izany fanajana ray aman-dreny ohatra